Posted on फ्रेवुअरी 15, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा हुने गरेको बहस पछिल्लो समय केही फेरिएको छ । रणनीतिक महत्व भएका छिमेकी र केही शक्ति मुलुकबाहेक अरूसँगको कूटनीतिको खास महत्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको हुन्छ । यस अर्थमा अबको बाटो भनेकै आर्थिक कूटनीतिको हो । मुलुकको समृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउने यही आर्थिक कूटनीति र युरोपसँगको सम्बन्धका बारेमा यो साता हामीले युरोपेली संघ र बेनेलक्स -बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र लेक्जेम्बर्ग) राष्ट्रका लागि नेपाली राजदूत प्रमेशकुमार हमालसँग कुराकानी गरेका छौं । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका हमाल राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी उपप्रतिनिधिसमेत रहिसकेका छन् । दुई वर्षअघि ब्रसेल्स गएका एमालेसमद्ध कूटनीतिज्ञ हमालसँग कुराकानी
त्यसको निमित्त के हुनुपर्छ ? त्यसका निमित्त सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो उत्पादन पहिचान गर्नुपर्‍यो । हामी कुन देशमा जान सक्छौं, कुन कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, के उत्पादन गर्दा हामीले सबैभन्दा बढी बजार सुरक्षित गर्न सक्छौं भन्ने निश्चित गर्नुपर्‍यो । केही कुरा त हामीले निश्चित पनि गरिसकेका छौं । जस्तो, पर्यटन । त्यसका निम्ति पर्यटक आकषिर्त हुने गतिविधि हुनुपर्‍यो । सुरक्षित वातावरण हुनुपर्‍यो । त्यसअनुसारको पूर्वाधार विकास हुनुपर्‍यो ।
Filed under: समचार « ‘भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ’:-मनीषा प्रबासमा छोराको मृत्युको खबरले परिवारमा रुवाबासी, पूरै गाउँ शोकमा »